Ndị na-agba ụta, ịde blọgụ, na Nkwurịta Okwu | Martech Zone
Mgbe nọ n'Natù Ndị Agha Mmiri US, otu n'ime usoro nke nkwukọrịta nke enyere n'iwu bụ ịmata ozi ịnata ma jiri nkwenye kwughachi ya. Dịka onye ọkụ eletrik, otu ọrụ m bụ ịkwado njikwa Bow Thruster. Bowta Thruster bụ ihu ọma dị n’etiti ọwara nke na-esi n’otu akụkụ nke ụgbọ mmiri ahụ gaa na nke ọzọ na Bow. Ọ bụ igwe eletriki nke Bow Thruster gbara ọsọ na ọ chọrọ Generator nke ya ka ọ nọrọ n'ịntanetị yana ọnụọgụ ọnụọgụ ọ were rụọ ọrụ.
Anọ m n'ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri (LST-1192) nke ezubere iji gbaba n'ụsọ osimiri ma malite nnukwu mkpọda iji kpochapụ tankị na ụgbọ mmiri. Thta Thruster kwere ka njikwa ụgbọ ahụ dị n'ihu (ụgbọ mmiri). Onyeisi ụgbọ mmiri ga-eji ya, yana injin isi, jiri nlezianya kpoo ụgbọ mmiri ahụ. N'elu mmiri ahụ, e nwere ọtụtụ ndị na-enyocha ọnọdụ ụgbọ mmiri ahụ, njikwa njikwa ya, ihe ndị ọzọ, wdg. ihe mgbochi na ebe ọ na-aga.
Iji hụ na Captain maara nke ọma, ọ ga-ajụ ajụjụ ma ọ bụ kụọ iwu. Kingjụ ajụjụ ga - eme ka azịza si n'aka onye ọkwọ ụgbọ mmiri ahụ ajụrụ ajụjụ ahụ wee kwuo na onye isi ndị agha ga - azaghachi azịza ahụ. Mgbe ị na-enye onye ọkwọ ụgbọ mmiri iwu, ọkwọ ụgbọ mmiri ahụ ga-emeghachi iwu ahụ ma mezuo iwu ahụ. Ozugbo o mechara, onye ọkwọ ụgbọ mmiri ahụ ga-ekwupụta na arụchaala ọrụ ahụ ma Onyeisi ụgbọ mmiri ahụ kwughachiri ma kweta ya. Edere ihe a niile na ndekọ nke ụgbọ mmiri.
Nkwurịta Okwu Naval
A mkparịta ụka sample nwere ike ịbụ:
Onyeisi: "Bow Thruster, otu ụzọ n'ụzọ ise ike starboard."
Onye na-akwọ ụgbọ mmiri nke nọ na Bow Thruster, tụgharịa isi otu ụzọ n'ụzọ ise nke ụzọ gaa n'aka nri.
Thta Thruster: "Bow Thruster, otu ụzọ n'ụzọ ise ike starboard, aye."
A gwara m ka m gbanwee ụzọ m otu ụzọ n'ụzọ ise n'aka nri. Nwetara ya!
Thta Thruster Onye Ọrụ na-eme ka isi ya ruo otu ụzọ n'ụzọ ise.
Thta Thruster: "Captain, ụta thruster bụ otu ụzọ n'ụzọ ise ike starboard."
Agwara m Onyeisi ahụ na m tụgharịrị isi ahụ otu ụzọ n'ụzọ ise nke ụzọ gaa n'aka nri.
Onyeisi: "Bow Thruster bụ otu ụzọ n'ụzọ ise ike starboard, aye."
Anụrụ m gị! I kwuru na ọ bụ kpakpando nke ise.
Ihe mara mma di nma iji gbanye isi, nri? Ma ịgbanye isi ahụ ga-eweta ọtụtụ ihe… amperage sitere na Generator, nke ga-adọta injin mmanụ dizel, nke onye ọkụ eletrik na-ele anya iji hụ na ọ nweghị ihe ọ bụla mere, Engineman na-ele mmanụ dizel na oriri ya nke mmanu mmanu ya na mmanu mmanu ya, nke Chief Engineer lere anya nke hu ike ya nile na osisi dizel. Ndị agha ahụ ghọtara na nkwukọrịta bụ isi ihe, yabụ usoro ikwughachi ozi ahụ na ịkwado ozi ahụ na-eme ka o doo anya na enweghị ozi ọ bụla na ozi ahụ.
Na Puerto Rico otu oge, Onye Ọchịchị na-ahụkarị nọ n'isi ma nọgide na-ajụ ịnabata ọnọdụ nke Bow Thruster. Onye ọrụ ụgbọ mmiri ahụ (m) gara n'ihu na-agwa ya na Bow Thruster nọ na ike na otu ụzọ n'ụzọ atọ, na-agba ụta ahụ n'ọdụ ụgbọ mmiri. Amalitere m ịkwado Bow Thruster (nke a bụ n'ezie imebi iwu) mgbe m na-ekwughachi (na ụda olu) na ọ gbara. Ọganihu. Gbọ mmiri ahụ na-akwado n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ ma ụta ahụ dọkpụrụ anyị ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri ahụ. N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ n'ime ya bụ naanị osisi mana ọ ka mebiri ọtụtụ narị puku dollar. Ihe niile n’ihi na onye ndu egeghị onye n’okpuru ya… onye na-eme ihe a gwara ya. A chụpụrụ onye uwe ojii ahụ na Bridge ma hapụkwa ka ọkwọ ụgbọ mmiri ahụ ọzọ.
Enwere m nnukwu nkwanye ùgwù maka US Navy. Anyị gbapuru na-enweghị nkwụsị maka ihe mberede na-emetụbeghị iji hụ na anyị mere ihe ebumpụta ụwa kama ịtụ egwu. Anyị na-ekwurịta okwu na-enweghị nkwụsị. Ndị folks ahụ enwetụbeghị ọrụ ahụ nwere ike iche na ụdị nkwukọrịta a bụ ihe efu… ọ bụghị. Mgbe m lere anya na nsogbu anyị kachasị na ọrụ, 99% nke nsogbu ndị ahụ metụtara nkwukọrịta, ọ bụghị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị na-eje ozi. Navy US eguzobela ọkwa, ọrụ, usoro yana ụzọ nke nkwukọrịta. Ekwenyere m na àgwà ndị a na-ahụkwa na azụmaahịa na-aga nke ọma.
Kedu ihe jikọrọ ihe a na ịde blọgụ?
Na… ikekwe ha na-hụrụ na ịde blọgụ dị ka mma! Ọ bụrụ na m na - ekwurịta okwu na blọọgụ ọzọ, blọọgụ ahụ na - enweta trackback, blogger ahụ abịaghachila wee gụọ ma kwuo na blọọgụ m. (Na Anglịkan) ezigala ozi a ugboro ugboro wee kweta. Ikekwe ọ bụ ya mere ịde blọgụ bụ ngwá ọrụ dị egwu dị egwu na teknụzụ ndị na-akpata na-amalite ịmalite nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ụlọ ọrụ. Ama m na m gụrụ gbasara ya Blog nke Jonathon Schwartz ma kwenye na ọ sịrị na ọ na - enyere ọ bụghị naanị izipu ozi ya n’ụwa niile - mana ọ na - enyekwa ndị ọrụ Sun ya ozi ahụ.
Anaghị m ekwupụta na ụlọ ọrụ kwesịrị ịgba ọsọ dị ka onye isi ụgbọ mmiri na-agba ụgbọ mmiri. Ndị Agha Mmiri US ekwesịghị irite uru ma ọ bụ chekwaa ego ọ bụla. Naanị ebumnuche US Navy bụ ịkwadebe maka iyi egwu nke nwere ike ọ gaghị adị.
Na-agba ọsọ ụlọ ọrụ na-aga nke ọma
Ana m eche; Agbanyeghị, otu ụlọ ọrụ na-aga nke ọma mgbe ha nwere ikike, ọkwa, na ọrụ doro anya. M na-eche otú mfe anyị ọrụ ga-abụ ma ọ bụrụ na direction a n'ụzọ doro anya na-ekwurịta okwu, kweta, na ugboro ugboro azụ. M na-eche ka ndị isi ole ga-eme nke ọma ma ọ bụrụ na ha egee ndị nọ n'okpuru ha mgbe ha mechara iwu ndị ahụ.
Ekwenyesiri m ike na obere ụlọ ọrụ ga- 'gbaba n'ime' nsogbu ma ọ bụrụ na ha mere.
Ederede a sitere na izu ike na-arụ ọrụ. Ndi oru mmepe anyi mebere ma weputa ufodu ihe di egwu n’ime ngwa anyi n’izu a. Dị ka onye njikwa ngwaahịa, ọrụ m bụ (n'ụzọ dị ịtụnanya) iguzo na "Warlọ Agha", na-ekwurịta ma na-ebute ụzọ okwu ndị nwere ike isi na ndị ahịa anyị pụta. Mgbe ụbọchị 4 gachara “na ime ụlọ agha”, apụrụ m ikwu n’eziokwu na - n’agbanyeghi na anyị nwere obere chinchi - isi okwu bụ niile mmebi na nkwurịta okwu.
Ihe kachasị mma m natara na Blog m
Mee 18, 2007 na 1: 52 PM
Doug, m ga-agarịrị ịsị na ndị mmadụ nọ n'obodo anyị na-ekwurịta okwu. Anyị na-ebi n'ime ụwa egwu na mkparịta ụka na-ata ahụhụ, anyị onwe anyị dị ka mmadụ mkpa nkwukọrịta iji mezuo na ndụ anyị. Ọ bụghị naanị ka ihe ịga nke ọma n’achụmnta ego, kama ka ị ga-enwekwa ọ atụ n’udo. E mere ụmụ mmadụ ka ha na ibe ha na-emekọ ihe.
Anyị niile ga-eme nke ọma na ọfụma ma ọ bụrụ na anyị na-achọ mgbe niile iziga ozi ahụ nke ọma, nyochaa na anyị anatala ozi nke ọma ma kwenye nnata nke nkwukọrịta a. O nwere ike iyi ka igbu oge nye ọtụtụ ndị, mana ọ ga - akara m mma ịhapụ oge ahụ n'ihu karịa n'okporo ụzọ na - edozi ngwakọta nke mere b / c ozi abụghị (a) agwa ya nke ọma, (b) enwetara ya nke ọma ma ọ bụ (c) ha abua. Wezụga “obi dị mma” stof, ọ naanị na-eme ka ụda azụmahịa uche dị ka nke ọma. Ezi post!
Mee 18, 2007 na 2: 08 PM
Anyi nwere nzuko ọgbakọ ulo akwukwo taa ma otutu mkparita uka banyere… nkwurita okwu nke ihe nile. Ana m eche ma nsogbu anyị niile na-esite n'ezi nkwukọrịta. Na anyi n’enwehuhu ihe ojoo n’adighi nke nkwurita uka, nke ahu bu otu esi eme ka ndi nnoo dika ndi Virginia Tech.
Daalụ maka ikwurịta okwu, Jules! Ọhụrụ m blog-enyi!
Nov 27, 2007 na 7:09 PM
Know maara ntinye a na-echetara m Titanic, nri? :)) Mara mma na-akpali .. o nwere ihe pụrụ iche na agbanyeghị.